Izhevsk State Nka na ụzụ University - Study Engineering na Russia
Izhevsk State Nka na ụzụ University
Izhevsk State Technical University Nkọwa
acronym : oTU
tọrọ ntọala : 1952
Echefukwala atụle Izhevsk State Technical University
Idebanye aha na Izhevsk State Technical University
Kalashnikov Izhevsk State Nka na ụzụ University e hiwere na 1952 na oge nke ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ ulo oru mmepe mgbe e nwere onye na-amụba ina na ukwuu ruru eru injinia, ike nke na ijikwa mmepụta Filiks. On ụbọchị nke ya 60nke ncheta ya aha mgbe kpara obere ogwe aka mmebe Mikhail Kalashnikov.
Ugbu Kalashnikov ISTU bụ a na-eduga elu izi alụmdi na mpaghara na otu nke na-eduga teknuzu ụlọ akwụkwọ na Russia, a na-azụ ndị injinia na ọmụmụ ha.
Kalashnikov Izhevsk State Nka na ụzụ University bụ a signatory nke Magna Charta Universitatum na Bologna, Italy na a zuru so na European University Association (USA). 6 okokporo na 1 nwe-amụ mmemme nke Kalashnikov ISTU e nyere ikike ịbụ site Central Evaluation na Accreditation Agency ZEvA, Hannover, Germany na-ekwe omume inye mba dị ubre Mmeju.
Kalashnikov nwere otu 5 alaka na umu-obodo nke Udmurt Republic ma agbata obi ógbè, ya bụ: Votkinsk, Sarapul, Glazov, Kambarka na Tchaikovsky.
Ugbu ISTU comprises 11 n'ahụ na 1 na ulo akwukwo, ha bụ:
Institute of Modern Technologies na Mechanical na Automotive Engineering na Metallurgy
Faculty of Economics, Iwu na Humanities
Faculty of Management Quality
Faculty of Okpomọkụ Engineering
Faculty of Advertising na Design
Tikhonov Institute of Physical Ọzụzụ na Sports
N'ime 760 nkụzi na-arụ ozizi usoro, 114 n'ime ha bụ dọkịta nke Science na / ma ọ prọfesọ, 379 - Oghere mmeri nke Science (PhD) na / ma ọ Associate prọfesọ.
Kalashnikov ISTU nwere isiokwu bụ iji nye izi ọrụ na 49 mmemme nke okokporo ọmụmụ, 38 mmemme nke ukwu ọmụmụ, 8 specialties nke elu ọkachamara ọzụzụ, 48 specialties nke PhD na 18 specialties nke doctoral ọmụmụ, 16 mmemme nke abụọ ọkachamara ọzụzụ, 1 omume nke isi ọkachamara ọzụzụ, nakwa dị ka omume nke ntụkwasị muta (nkà-update ọmụmụ na ọrụ mmughari, ọzọ nzere "Professional Translator", ọmụmụ ihe gaje ụmụ akwụkwọ). Ugbu Kalashnikov ISTU akụziri n'elu 20,000 ụmụ akwụkwọ, n'etiti ha karịrị 100 mba ụmụ akwụkwọ. The ọmụmụ na nnyocha ọrụ na-eduzi na 8 ụlọ, ọhụrụ otu meghere on 1 September 2009.
n'ihi na ihe karịrị 60 afọ karịrị 65,000 injinịa a zụrụ na Kalashnikov ISTU. Enwere 9 specialized Ọmụmụ Councils maka PhD na DSc ogo ebe a.
Scientific ụlọ akwụkwọ e haziri na ubi nke ike, pụrụ ịdabere, mgbagwoju akpaaka, CAD usoro, kọmputa sayensị, chemical technology, ule nke mgbagwoju ígwè. The mahadum na nkà mmụta sayensị na ụlọ akwụkwọ iduzi mgbalị ha na-edozi ihe ndị bụ isi nsogbu nke igwe-ụlọ, ngwá-eme industries, kọmputa sayensị na ọmụmụ ihe dị ndụ. Na-eme nnyocha nke Kalashnikov ISTU ọma isonye na Grant na mfọn mmemme na ibe onye mahadum ma local na mba ọzọ.
The mahadum nwere niile oge a ụlọ ọrụ aka ụmụ akwụkwọ na ọmụmụ ha na research. N'ime 2,500 PC na workstations nke Kalashnikov ISTU na-achọkwa n'ime n'elu 80 LANs jikọrọ Internet site na mahadum Internet-portal.
Na frameworks nke otutu ihe omume na kọmputa n'ọbá akwụkwọ nke Kalashnikov ISTU, na ugbu comprises n'elu 500,000 Ndenye, e emejuputa atumatu na ihe ịga nke ọma ọrụ. Na kwalite asụsụ ọma na laboratories nke mahadum eto eto ọkachamara nwere ike ime nnyocha, nakwa dị ka mgbanwe ọmụma na ndị ọrụ ibe ha n'ụwa nile via Internet.
Kalashnikov Izhevsk State Nka na ụzụ University e mgbe niile na-emepe emepe ya mba mmekọahụ. Ọmụmụ agagharị omume na-emejuputa atumatu na-akwalite.
Ụmụ akwụkwọ nke mahadum na-ebi ala gọọmenti rụrụ na kampos. Ha nwere nri n'ebe canteens na nri Ogwe enịm ke mahadum ụlọ.
Health ọrụ maka ụmụ akwụkwọ na ọrụ na-nyere site na mahadum polyclinic. The mahadum nwere ya ike center maka 100 mmadụ.
The ụmụ akwụkwọ nwere niile dị mkpa akụrụngwa maka na-aga na n'ihi sports. The mahadum nwere n'ámá egwuregwu, 8 gyms, a tenis na a ohuru egwu mmiri n'oge ya mkpofu. Maka ụmụ akwụkwọ na pesonel na-enwe ezi na ọkpụrụkpụ ọzọ, e mahadum egwuregwu mara ụlọikwuu n'usọ osimiri Kama.
E nwekwara a Obí Culture "integral" na-atụrụ ndụ. Ọ bụ ebe mgbakọ nke nzukọ na ngosi, nakwa dị ka otutu ntụrụndụ ememe. The mahadum Municipal Theater "Young Man", -eto eto nke ọtụtụ asọmpi na-eme ememme, bụ nnọọ ewu ewu. Na ala na ụlọ-museum of Peter Tchaikovsky na Votkinsk omenala na ebe agụmakwụkwọ nke Kalashnikov ISTU e tọrọ ntọala.
obere ogwe aka
Production nke Machines na Mechaisms
Okpomọkụ Engines na Plants
Ike nke Materials
Usoro iwu na-arụzi ụgbọala na Theory nke usoro na Machines
Emebe na nkà na ụzụ Nkwadebe nke Machine-Building Production
Ụgbọala na Metal-arụ ọrụ Machinery
Machines na Technology maka Metal akpụ na ịgbado ọkụ Production
Metal Technology na Metal Science
Communication Networks na Telecommunication Systems
Quality Control Instruments na Usoro
Akpaghị aka Data nhazi na Control Systems
Accounting na Economic Arụ Ọrụ Analysis
Finance na Ebe E Si Nweta
Economics, Technology na Management na Commerce
Faculty of Iwu na Humanities
Civil Iwu na Legal Regulation nke Economic Relations na Industry
Theory nke Iwu na State-Legal ọzụzụ
Criminal Iwu na Usoro
Labor Relations na Industry
sociology, Psychology na Culture Studies
Scientific-ụzụ Translation na Intercultural Communications
Physical Ọzụzụ na Sport
Industrial na Civil Engineering
Geo-Engineering na Constructional Materials
Construction na Road-Building Machinery
Nanotechnologies na Microsystem Engineering
Applied Mathematics na Informatics
Mathematical Modelling nke Filiks na Technologies
Mathematical Technologies na Oil-and-Gas Machine-Building
Mathematical Nkwado maka Ozi Systems
Physics na Optical Engineering
Chemistry na Chemical Engineering
Okpomọkụ Power Engineering
okpomọkụ Tụkwasịnụ, Heating, Ventilashion na Conditioning
Mmiri Tụkwasịnụ na Mmiri Nkwadebe
Technology nke Industrial na Artistic Ihe arụ ọrụ
Engineering Graphics na Advertising Technology
Tikhonov Institute of Physical Training Ma Sports
Biathlon na Sport Technologies
Izhevsk Mechanical Institute e tọrọ ntọala na-eso Mkpebi nke Council nke Ozi nke USSR No 1034 dere February 22, 1952. The mbụ aha gụnyere 200 ụmụ akwụkwọ. The Institute ugbua Mechanical (pụrụ iche) na Mechanical na nkà na ụzụ ikike. The mbụ Rector (Director) nke Institute bụ Vladimir Pavlovich Ostroumov, PhD, prọfesọ (bụbu Dean nke a ngalaba na Moscow Higher ụzụ School (MHTS), Isi nke otu n'ime ndị kasị ochie Ngalaba - Technology nke ọla na Metal Science).
The Institute e nsogbu ke ụlọ 79 on Gorky Street. The mbụ mgbịrịgba e nyere maka 100 freshmen site Nikolay Vasilyevich Vorobyov, DSc, prọfesọ (a mbụ Prọfesọ nke MHTS). The ọmụmụ ekenịmde ke atọ specialties.
Na mmalite Institute bụ-eji nwere nke Bauman MHTS, nke nwere ahụmahụ na-ọzụzụ injinia na Izhevsk (esi kpọpụ mmadụ nile n'oge Akwa Agha Ịhụ Mba n'Anya), na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke Republic.
Ọbá akwụkwọ ego malitere ina kpụrụ. The isi gbara replenishment bu onyinye si dị iche iche na ulo akwukwo ọba akwụkwọ nke mba (Moscow Aviation Institute, Bauman MHTS, Moscow Auto Mechanical Institute, Kazan Aviation Institute). Taa ọbá akwụkwọ ego nkejikotara n'elu 800 puku mpịakọta; Ọbá akwụkwọ na-enweta banyere 1,000 na-agụ akwụkwọ kwa afọ.
Radio center hazie. Na mbụ ya broadcasted ọkwa na music, mgbe radio akwụkwọ akụkọ na ya redio pụtara.
Primary Voluntary Association for Assistance ka Army, Air Force na Navy hazie.
The mbụ IMI Spartakiad wee ebe.
Construction nke Ụlọ Mbikọ No 1 malitere na Metallurg District.
Military Department hazie.
Nga ọmụmụ haziri n'okpuru nlekọta nke Boris Vladimirovich Saushkin, gụsịrị akwụkwọ na MHTS.
Nzukọ mbụ nke Student Scientific Society wee ebe.
Trade n'otu nke IMI e tọrọ ntọala, ntuli aka nke mbụ ahia otu kọmitii e rụrụ.
Rehearsals nke Jazz Dance eti egwú nke IMI malitere n'okpuru nduzi nke G.I. ntutu (ugbu a na "Big Band of ISTU").
The mbụ Student Scientific Conference wee ebe. Site na oge 55 ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ 5 ngalaba.
The onwe ha Faculty of Mechanical Engineering e guzobere, nke na-rụrụ ọzụzụ instrumentation engineering (ruo mgbe 1961).
The laabu nke akụ na n'ise obere ogwe aka hazie, ugbu a ọ na-emekarị kwuru na dị ka Museum of Small ogwe aka.
Preparatory Department haziri na-arụ ọrụ na-eto eto si n'obodo na obodo nta na ex-servicemen iji weghachi ihe ọmụma nke usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịbanye IMI na imeghari mbụ afọ nke ọmụmụ na Institute.
The mbụ track-na-ubi agbụrụ e rụrụ na Kirov park, nke ahụ ghọrọ a omenala.
Post gụsịrị akwụkwọ na ọmụmụ meghere.
The mbụ aku nkwekọrịta ndị mere nke Institute e banyere na-ebu na nkà mmụta sayensị na-eme nnyocha na-arụ ọrụ, nke tọrọ ntọala maka ihe niile ndị sayensị na-arụ ọrụ nke Institute.
The mbụ ngụsị akwụkwọ nke 106 idobere ọrụ a na-Military Department.
Anyasị ọmụmụ e mepụtara na IMI, ebe ọrụ nke Izhevsk ụlọ ọrụ na-gụrụ akwụkwọ (149 ụmụ akwụkwọ si Moto Plant naanị).
Na okpomọkụ mbụ na-amụrụ na-arụ ọrụ otu gawara a "New Land" (150 ụmụ akwụkwọ).
The akpa nkewa na akụkọ ihe mere eme nke Institute e kere ibuso nsogbu.
The mbụ ubre agbachitere e rụrụ site n'ibu injinia ọkachamara n'ibu injinịa technology, metal-ịcha igwe na ngwaọrụ.
IMI a họpụtara dị ka a onye na-elekọta nke ogige ụmụ mgbei na Nylga obodo ahụ e kpọpụrụ n'oge 2nd World War si nọchibidoro anọchibido Leningrad.
Votkinsk Alaka nke IMI Faculty of Evening Ọmụmụ e meghere na ndabere nke Study Nkwado Center of All-Union Extramural Machine-Building Institute na Votkinsk Machine-Building ụzụ School; 75 ụmụ akwụkwọ ọkachamara n'ibu injinịa technology, metal-ịcha igwe na ngwaọrụ na-debara aha.
The Department of Instrumentation Engineering e tọrọ ntọala, nke ghọrọ ihe ndabere nke onwe ha Faculty of Instrumentation Engineering na 1961.
Mgbe All-Union Leninist Young Communist League nzute echiche wee na-ewu a ámá egwuregwu site ná mgbalị nke ụmụ akwụkwọ.
The Faculty of Instrumentation Engineering hazie site jikọta Ngalaba nke Computing Machines, Ọdụdọ Engineering na Physics.
The Department of Computer Engineering meghere a na kọmputa center na mbụ zuru electronic oriọna Mgbakọ igwe "Minsk-1" (mbụ Mgbakọ igwe na obodo).
Study Nkwado Center nke Ural Polytechnic Institute na Glazov e me n'okpuru akara nke Institute na na 1992 ghọrọ ya alaka.
Nkà Update Ọmụmụ maka engineering na oru pesonel na e haziri na Institute. Ha gụnyere ndị School maka Managers, Primary School of Management na School maka Newly Ruru Eru Engineers.
Construction nke Ọmụmụ na Laboratory Building na Metallurg District e dechara (ugbu a na-agụmakwụkwọ ụlọ № 2), n'ọdịnihu campus n'ókèala a kọwara (ugbu a Studencheskaya Street).
The mgbede alaka nke IMI e meghere n'obodo Sarapul na ndabere nke Study Nkwado Center nke IMI.
Applied research laabu na nsogbu nke anwụ ngwa ngwa na ụba na arụmọrụ nke igwe nke Ministry maka Machine-Building na Ngwá Ọrụ Na-eme Industry e meghere. site 1968 ka 1992 ọ bụ nanị ibe ya bụrụ laabu na mba; laabu ike na-emepụta pụrụ iche akpaaka na ígwè ọrụ na usoro na servo draịva na omume akara usoro maka ibe ya bụrụ na pịa akpụ agba.
Scientific Research Laboratory hazie (SRL, na mbụ na-akpọ ya Special Purpose Scientific Research Laboratory).
The Patent Ozi Department of IMI e tọrọ ntọala (si 1996 ka 1999 ọ bụghị na-arụ ọrụ, na e meghere ọzọ 2000).
The arụmọrụ Komsomol Brigade hazie.
Nikolay Vasilyevich Talantov, DSc, prọfesọ, a họpụtara ndị Rector nke IMI.
Stadium "Burevestnik" nke IMI e solemnly meghere. N'afọ ndị ahụ, ọ bụ nke kacha mma track-na-ubi eweta na Udmurtia, naanị ámá egwuregwu na bụ ihe na ulo akwukwo; akwụkwọ akụkọ "Komsomolskaya Pravda" na-akpọ ya "Izhevsk Luzhniki".
Mpụta mbụ nke IMI otu na Club maka Lightheaded na Ndenye-witted (Valery Panagushin, Veniamin Goldfarb, Viktor Kosenko na ndị ọzọ).
The Faculty of Engineering na Economics nke IMI e guzobere.
The shortwave redio nke IMI hazie na ụzọ nke A. Okhotnikov na N. Osipov, egwuregwu nke Izhevsk Radio Club of Primary Voluntary Association for Assistance ka Army, Air Force na Navy onye bu ọla medalists nke USSR egwuregwu na shortwave redio nkwurịta okwu.
The ewu nke ụgbọ mmiri ojii malitere.
The ewu nke ezinụlọ ụlọ nke ámá egwuregwu e dechara.
Na mmalite nke na-ewu nke egwuregwu mara ụlọikwuu nke IMI na Kama osimiri nso obodo Galevo. The mbụ otu nke ndị ọrụ ugbua 120 ụmụ akwụkwọ na 16 nkụzi.
Na mgbụsị akwụkwọ nke mbụ ngagharingosi ọzọ nke na-achọ ịbata na ụmụ akwụkwọ wee ebe (ugbu a na ọ bụ Freshmen Welcome Party).
The mbipụta mbụ nke Institute akwụkwọ akụkọ "Mechanic" e wepụtara. Akwụkwọ akụkọ e bipụtara ugboro abụọ a ọnwa.
Votkinsk Branch nke mgbede ngalaba nke IMI ghọọ Votkinsk Alaka nke Institute.
Sports na ntụrụndụ mara ụlọikwuu na Kama osimiri meghere akpa oge.
The mbụ na-amụrụ na-arụ ọrụ otu na Republic hazie na IMI. Mmụta nke otu aka iru Yanaul-Chad ụgbọ okporo ígwè.
Scientific Research Laboratory na akpaka igwe hazie.
The guzobere na nkà mmụta sayensị na ụlọ akwụkwọ na-aga n'ihu na IMI; mbụ ọgbọ nke ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ gbachiteere ha ngụsị akwụkwọ oru ngo.
Na mmalite nke na-ewu nke ndị égbè gallery n'okpuru agụmakwụkwọ ụlọ ke Metallurg District (ugbu a na-agụmakwụkwọ ụlọ No 2).
The ewu nke ụgbọ mmiri ebe e dechara.
Historical ije nke Komsomol òtù IMI ka n'ọgbọ agha nke 753-ogbunigwe ndi agha. Ndị dị otú ahụ mere eme na n'ọnọdụ dị iche iche na ebe agha na oru ebube nke Soviet ndị ghọrọ ndị a omenala. Ke akpa ọkara nke 1970-s iche iche nke Komsomol òtù ije ụzọ nke Udmurtia, gara Kursk Salient, ka Karelia, Volgograd na Velikie Luki.
The Institute wee akụkụ ke Spartakiad "Enyi" maka Institutes si Ural na Siberia . ìgwè si 12 technical institutes si Ural na Siberia abuana na ihe omume.
The na-amụrụ na-arụ ọrụ otu si Udmurtia gara KAMAZ factory iji nyere aka melite mmezi nke factory ọrụ. Ha na-wuru ụzọ maka factory. The otu disbursed banyere 204 puku rubles.
Nikolay Alexandrovich Karpunin, DSc họpụtara ndị Rector nke IMI.
Undergraduate omume Industrial na Civil Engineering e meghere na ngalaba nke Engineering na Economics. Ọ tọrọ ntọala maka ngalaba nke Civil Engineering.
Undergraduate omume Agricultural Building e meghere. Mgbe na ngalaba nke Civil Engineering ghọrọ onwe ha.
18 institutes nke USSR wee akụkụ ke Inter-Institute Spartakiad "Enyi".
Alexey Matveevich Lipan, DSc (ugbu a so na Russian Academy nke Science) a họpụtara ndị Rector nke IMI.
The ụlọ nke nsọpụrụ raara nye 30nke ncheta nke mmeri na Great Agha Ịhụ Mba n'Anya e meghere na Institute.
The mbụ arụmọrụ nke Student Ụlọ ihe nkiri nke Skits ẹkenịmde ke Institute. N'ikpeazụ ndị nkiri a na-akpọ IzhMechSmekh ("Smekh" bụ okwu Russian "ọchị").
Ọ bụ ihe ndekọ isua na agụmakwụkwọ rụzuru na IMI: zuru agụmakwụkwọ ọganihu na ngalaba nke Instrumentation Engineering bụ 99.3%; 14 ogologo-A ụmụ akwụkwọ!
The pụrụ iche na kansul na PhD agbachitere e meghere na IMI. Na ọtụtụ afọ 3 ọzọ councils meghere.
Student arụ ọrụ ìgwè wee akụkụ ke mpi maka nri na-aha mgbe 25nke ncheta nke IMI.
The mbụ track-na-ubi na-amụrụ agbụrụ na ncheta nke Victory Day ẹkenịmde n'ụzọ ahụ: Izhevsk-Ulyanovsk. Ọdịnala track-na-ubi agbụrụ na dike n'obodo nke USSR ya ruo 1982. Mgbe ahụ, ọ di ndu na 2003.
1980 - Izhevsk - Novorossiysk, agbụrụ a raara nye 35nke ncheta nke mmeri na Great Agha Ịhụ Mba n'Anya
A pụrụ iche na-amụrụ na-arụ ọrụ otu CSB (Communist Shock Brigade) haziri na ngalaba nke Civil Engineering. All ego akwụ site otu e zitere ụmụ mgbei na Nylga.
The results nke ụmụ akwụkwọ 'agụmakwụkwọ na nnyocha na-arụ ọrụ ihe ịga nke ọma na All-Union Ngosi nke rụzuru nke National Economy.
79 sonyere nke ngosi si IMI natara diplọma na Ọla.
The ewu nke Mmụta Obí "integral" e dechara.
The Student Ụlọ ihe nkiri nke Skits "IzhMechSmekh" e ọdịda aha nke Ndị mmadụ Ụlọ ihe nkiri. The director nke nkiri bụ Evgeny Stolov.
The egwu nke Nikolay Gutorovich, gụsịrị akwụkwọ nke ngalaba nke Mechanical Engineering, na-agụ egwú, Naa Artist nke Russian Soviet Federative Socialist Republic, ada itie ke Student Obí "integral".
Russian mba ngosi "akpaaka na ígwè ọrụ na Machine-Building, Metallurgy na Construction "ẹkenịmde ke Institute maka oge mbụ. 42 institutes na otu alaka 35 obodo nke Russian Soviet Federative Socialist Republic were òkè na ya; n'etiti ndị sonyere ndị 20 Polytechnic institutes. 269 ngosi adade e, 33 ngosi si IMI, 18 nke ha na-ẹkenam ke ụlọ ọrụ na-ekwe na-azọpụta 3.6 nde rubles.
Mgbe ị na-atụle ihe ndị Machine-Building, Metallurgy na Construction ngalaba nke ihe ngosi, juri nyere mbụ ebe Izhevsk Mechanical Institute na Perm Polytechnic Institute. Ha na-nyere mbụ na klas diplọma.
"IzhMechSmekh" natara Grand Nrite nke magazin "Student Meridian" ke All-Union Ememe Student ekiri fim nke Skits n'obodo Donetsk.
N'okpuru nlekọta nke V.M. Zlatkis, Ngalaba Computer Engineering malitere ifịk mmepe na ngwa nke ọhụụ usoro dị iche iche ụlọ ọrụ nke Udmurtia na ndị ọzọ na mpaghara nke mba.
Oleg Ivanovich Shavrin, DSc, prọfesọ, ghọrọ Rector nke IMI.
Health na Recreation Center e meghere (n'ụzọ zuru ezu kwadebere n'ụzọ na 1984).
The Patent Department na Foundation maka Description of mepụtara niile na ngalaba nke technology haziri iji kwalite na nkà mmụta sayensị researches na-akpali mmepe nke mepụtara. The Foundation ghọrọ ndị kasị ibu Republic.
The mbụ pụrụ iche na kansul na doctoral dissertation agbachitere e meghere na ngalaba nke Mechanical Engineering. Ọ mụbara ọnụ ọgụgụ nke PhDs na dọkịta nke Science n'ike n'ike. Na 1990-s ọnụ ọgụgụ nke doctoral councils na Institute ụba sharply. Taa ISTU nwere 6 doctoral councils na otu PhD kansul.
Nkebi A nke atọ agụmakwụkwọ ụlọ e meghere; kantiin nchekwa nkeji na rụchara ụlọ ndị dị njikere maka nrigbu.
IMI họpụtara isi guzobe ememe nke Ministry of Education nke Russian Soviet Federative Socialist Republic maka Organization of Special-Purpose na kpụ ọkụ n'ọnụ Ọzụzụ nke Ọkachamara maka agbachitere ụlọ ọrụ ọkachamara na Mechanical na Instrumentation Engineering.
Faculty of Robotics e guzobere na ndabere nke Mechanical-nkà na ụzụ Faculty. Ọ-ruo eruo na ọhụrụ akara nke igwe-ulo na mmepe.
N'ihi na eziokwu na obodo a gbanwere aha si Izhevsk ka Ustinov, Izhevsk Mechanical Institute e renamed n'ime Ustinov Mechanical Institute.
The ụzọ na égbè gallery meghere nwalee obere ogwe aka (mgbe ọdachi na 1991 na-agbapụ gallery e mechiri).
Alaka nke Department of Manufacturing nke Machines na usoro e meghere na Scientific na Research Institution of Technology "Ọganihu". Ọ bụ alaka mbụ nke ngalaba ke kpuchie nke Program of Special-Purpose na kpụ ọkụ n'ọnụ Ọzụzụ nke Ọkachamara.
Maka ụmụ akwụkwọ 'rụzuru na nkà mmụta sayensị na-eme nnyocha na-arụ ọrụ, Ozi nke Higher Education nke USSR rịọrọ IMI iji hazie na nọrọ n'ụlọ All-Union Ngosi nke Scientific na nka na ụzụ Creativity nke Youth - XI na All-Union Kọntestị "Student na nkà na ụzụ Ọganihu - 86".
The ewu nke 2nd agụmakwụkwọ ụlọ na ihe nkekọ skai ebusa e dechara. The egwuregwu center na abụọ gyms e meghere na 3Rd agụmakwụkwọ ụlọ.
Mgbe Chernobyl mberede, ìgwè si IMI ọnụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe "Izhmash", SRIT "Ọganihu" na Sarapul Electric Generator Plant jisiri ike n'ime otu izu a redio na-achịkwa ụgbọ ebe a robot maka ịnakọta redioaktivu irighiri nke konkiri.
Ọrụ IMI dị ka òtù nke Commission on Ịnakwere Ule wee akụkụ ke njem na ụwa (na Indian Ocean, weather ship "Musson") na prototypes nke nonstandard ngwá mepụtara na-emepụta nke ngalaba nke Mechanical Engineering maka National Committee on Hydrometeorology.
The cross mba skai agbụrụ na-akpọ "Sport bụ nnochite Udo" wee ebe. The sonyere nke agbụrụ nyere 13 okwu, rụrụ ọrụ nghazi ọrụ 6 obodo na ụlọ akwụkwọ, nyere 10 concerts na 3 noo na nzukọ nke egwuregwu na-eme, haziri 3 skai asọmpi maka ụmụ akwụkwọ na 7 egwuregwu na volleyball na basketball. The otu kpuchie banyere 90 kilomita.
Dị ka aha obodo gbanwere azụ, Ustinov Mechanical Institute laghachi ya aha - Izhevsk Mechanical Institute.
Ivan Vasilyevich Abramov, DSc, prọfesọ, a họpụtara ndị Rector nke IMI.
The Faculty of Economics e mechiri na ngalaba nke Engineering Cybernetics na Computer Science e guzobere.
Mmepe nke a na nkà mmụta sayensị isiokwu na nọ nke Ozi na Atụ Systems na Science na Mmeputa si Department of Computer Engineering (Y.V. Verkienko, V.S. Kazakov, A.D. Savinykh, K.Yu. Petukhov) e ọdịda S.I. Mosin agbata n'ọsọ.
Mmụta nke ngalaba nke Robotics arụ ọrụ otu mgbanwe na ụgbọ ala ụlọ ọrụ ma na zitere ego nile ha akwụ na ntọala haziri maka owuwu nke Ncheta ka Peacekeeping Agha ke Izhevsk.
Ndị Gụsịrị Akwụkwọ na nke Institute mere a dị anya njem a aka-mere ụgbọ mmiri nke ọmụ Class n'ụzọ ahụ Rostov-on-Don - Azov - Taganrog - Mariupol - Kerch - Feodosia.
Ọmụmụ Department na Ụzọ nke Ule nke Okpomọkụ Machines e meghere n'okpuru nduzi nke Yu.V. Verkienko, DSc, Prof., ọnụ na Institute of Applied Mathematics nke Ural Division nke Russian Academy nke Science. The Department e mere ihe ngwa anya electronic simulator maka mkpokọta agha na nabatara site Russian Army.
The n'oge mbu nke Republic mpi maka Student Ụlọ ihe nkiri Skits "Balda" e dechara.
The Faculty of Management na Marketing e guzobere.
The nkiri "IzhMechSmekh" enwetara ọnọdụ nke ọchịchị nkiri "A Young Man".
Ịgbaso pụta nke Institute nwale, Izhevsk Mechanical Institute enwetara ọnọdụ nke a oru mahadum na ghọrọ Izhevsk State Technical University - ISTU (Order nke onyeisi oche nke State Committee nke Russian Federation na Higher Education No 484 akara ụbọchị 22.12.1993).
The doctoral School e meghere na University na ijikọta 4 nkà mmụta sayensị na ubi na ubi- 16 specialties.
The mbụ mba ọzọ mbon gara ISTU (mmalite nke imekọ ihe ọnụ na German mahadum).
The Faculty of Computer Science e guzobere na ndabere nke ECCS Faculty.
The University gafere State Accreditation.
Ọmụmụ Sineti ẹkenam aha nke Asọpụrụ Prọfesọ nke Izhevsk State Technical University (Ẹkot Doctor Honoris Causa). The mbụ Asọpụrụ prọfesọ nke ISTU ghọrọ I.V. Abramov, V.I. Goldfarb, M.T. Kalashnikov, A.The. Konovalov, A.M. grayling, V.I. Kazachenok, O.I. Kshwrin, N.V. Azbelev. 44 ndị mmadụ e ọdịda aha nnọọ tinyere 13 mba ọzọ na-anọchite anya.
The Publishing House of ISTU e tọrọ ntọala na ndabere nke Editorial Department na Copy Center.
The Scientific na Research Center maka Intelligent Radiosystems hazie na Department of Radio Engineering, nke mesịrị ghọọ Radio Engineering Design Office nke a bughi subdivision nke Sarapul Radio Plant.
The Institute of arụzi haziri n'okpuru nlekọta nke Veniamin Iosifovich Goldfarb na ndabere nke na-amụrụ imewe ụlọ ọrụ.
The Faculty of Humanities e guzobere.
The Regional onodi nke Center maka Testing nke Ministry of Education nke Russian Federation e meghere na-ahazi na-eduzi centralized ule nke ụmụ akwụkwọ na-achọ ịbata na Udmurtia.
The Preparatory Faculty hazie (na 1999 ọ ghọọ ndị Institute of Ọmụmụ Communications), nke ghọrọ otu n'ime kwetara ndú na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ dị elu ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ nke na-aga n'ihu ọrụ aka mmụta na nke sekọndrị, ọrụ aka agụmakwụkwọ.
Ngosi ihe mgbe ochie nke Radio Electronics na Computer Science haziri.
Programmers nke ISTU wee akụkụ ke International Collegiate Programming Kọntestị (ICPC) n'okpuru nkwado nke Association for Computing Machinery (ACM).
The Faculty of Professional Pedagogics e guzobere (na 2008 ọ mmekọ na Faculty of Economics, Iwu na Humanities).
The International Office haziri ahazi ọnụ nke mba.
Mba nile mbụ Agreement nke Cooperation e banyere n'etiti ISTU na University of Pecs, Hungary.
The Institute of n'ihu ọrụ aka Education e guzobere.
The Faculty of Postgraduate Studies na agbakwunyere Professional Education hazie.
The mbipụta mbụ nke usoro iwu magazin "Vestnik nke Izhevsk State Technical University" e wepụtara (taa na magazin bụ na ndepụta nke na-eduga enyocha magazin, nakwa dị ka na ndepụta nke Higher Àmà Commission (Igbe), na a gụnyere n'ime Russian Scientific tikeeti Index).
The Faculty of Applied Mathematics e guzobere.
The Faculty of Quality Management e guzobere.
The Faculty of Sports e guzobere.
Sarapul alaka nke ISTU e renamed n'ime Sarapul Polytechnic Institute (Alaka nke ISTU).
Revival nke na-amụrụ na-arụ ọrụ ìgwè: Student arụ ọrụ Ìgwè Division nke ISTU "Mechan" bụ nke mbụ di ndu SWT nkewa Republic.
Izhevsk State Technical University e nyere ikike ịbụ na Ministry of Industry, Science and Technology nke Russian Federation dị ka a na nkà mmụta sayensị nzukọ.
University ọrụ natara M.T. Kalashnikov State Award nke Udmurt Republic (L.A. Glgn, V.N. Ezhov, Y.A. Sadilov, I.V. Ishmulin) maka emebe multimedia n'ihu banyere AK-47.
The Regional onodi nke Center maka Testing wee akụkụ ke All-Russian nnwale na mmejuputa iwu-nke edo State Exam maka 11-ọkwa na ụmụ akwụkwọ nke elu ụlọ akwụkwọ na Udmurtia.
The ebipụta nke akwụkwọ akụkọ "Mechanik" maliteghachiri (kwụsịrị na 1989).
The Faculty of Advertising na Design e guzobere.
The Faculty of Teachers 'iru eru Update e guzobere.
The Ministry of Education na Science nke Russian Federation aha 18 eduga izi research ìgwè ISTU na-eduzi isi researches.
The Faculty of Okpomọkụ Engineering e guzobere na ndabere nke Hydraulics na Okpomọkụ Engineering Department.
Ọkà mmụta sayensị nke ISTU (M.M. Gorokhov na I.G. Rysyak) E nyere ha na State Award nke Udmurt Republic na okirikiri nke sayensị na nkà na ụzụ nke a ọnụ ọgụgụ nke na-arụ ọrụ ubi nke ume arụmọrụ.
Olu Jazz Studio "Rec.time" hazie site Larisa na Alexey Pismerov, Naa Cultural Ọrụ nke Udmurt Republic.
Mba nile mbụ track-na-ubi agbụrụ n'ụzọ ahụ Izhevsk-Minsk mere na ụzọ nke rectors nke ISTU (Izhevsk) na BNTU (Minsk).
ISTU so ná ndị mbụ mahadum na bịanyere aka Magna Charta Universitatum na Bologna (Italy) na ghọrọ a soò nke Bologna Usoro.
The Faculty of Robotics ghọọ ngalaba nke Advanced Technologies na Automobiles.
The Faculty of Humanities ghọọ ngalaba nke Economics, Iwu na Humanities.
The Department of Nhazi na Educational Work na Mmụta e guzobere iji zụọ ndị ọkà mmụta sayensị na oru amamihe, ifịk ndị mmadụ na ihe uche ndị na-agbazi ka ndị a na-ụbọchị ndụ ọnọdụ.
Grant mpi ẹkenịmde maka Postgraduate na Undergraduate ụmụ akwụkwọ. The mpi a raara nye 100nkencheta nke V.P. Ostroumov, ya bụ onye mbụ Rector nke IMI.
N'ihi na oge mbụ, Izhevsk Radio Plant nyere pụrụ iche nye n.a. Valery Agafangelovich Shutov (mbụ Director General nke osisi (1978-1992), Asọpụrụ Citizen nke Izhevsk) ka ụmụ akwụkwọ nke ISTU onye-enweta pụrụ iche pụta na nkà mmụta sayensị na agụmakwụkwọ ọrụ. The Shutov Award e nyere ihe kasị mma ụmụ akwụkwọ ugboro abụọ n'afọ.
The Forum "Education Quality-2004" (Eq-2004) ẹkenịmde. The First International Conference "ụzụ Universities: Integration na European na World Systems of Education "hazie na kpuchie nke Forum. The omume a mgbe nile e kwa afọ abụọ.
N'ihi na oge mbụ, omenala na-amụrụ volleyball ndorondoro na ebe nchekwa nke Yury Mineevich Merzlyakov (1947-2003) haziri; ọ bụ otu n'ime ndị kasị mmasị na-ewu ewu ndú akụkọ ihe mere eme nke University.
Student Iwu-Enforcement Unit "Rys" e guzobere na ụzọ nke ụmụ akwụkwọ na Security Department of ISTU.
Ná nzukọ nke European University Association na Brussels mkpebi e mere na zuru onye otu nke ISTU na EUA. ISTU ghọrọ 11nke mahadum nke Russia na-enweta nsọpụrụ dị otú ahụ.
The mbụ forum nke Undergraduate na Postgraduate ụmụ akwụkwọ nke ISTU wee ebe. Anọchitekwa anya nke ikike, òtù nke na-amụrụ ọrụ ìgwè na-amụrụ ụlọ mbikọ councils nakwa dị ka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi 'ahia n'otu wee akụkụ ke forum.
The Rector nke n'ikuku maka ogologo-A ụmụ akwụkwọ ẹkenịmde, ugbu a n'ikuku ẹkenịmde kwa afọ na a na-akpọ "Student nke Year".
ISTU e nyere ikike ịbụ site Federal Space Agency (Roskosmos) na natara ikike na-eduzi ọrụ ejikọrọ na ohere ọrụ (ozi nhazi na mmepe nke pụrụ iche software).
Ijipt-Russian University (DỊ) e meghere nso Cairo na Badr obodo. Russian òtù nke Board of founders nke ERU ndị I.V. Abramov (mgbe Rector nke ISTU) na M.T. Kalashnikov (obere ogwe aka mmebe na ihe Asọpụrụ Prọfesọ nke ISTU).
The Educational na Ule Center nke Russian dị ka a Foreign Language e meghere; ọ na-nyere ikike ịbụ iji nwalee mba ọzọ nationals na inye asambodo nweta Russian amaala.
The Postgraduate Department e guzobere.
Team nke na-emepụta nke nkà na ụzụ nke bimetallic iwu akụkụ maka ọpụrụiche ugbo ala (academician A.M. grayling, na ndị ọkà mmụta sayensị nke ISTU S.D. Solovyov, PhD na O.I. Kshwrin, DSc) E nyere ha M.T. Kalashnikov Award.
V.M. Verzhbitsky, a lecturer nke Department of Applied Mathematics na Computer Science, natara State Award nke Udmurt Republic na ubi nke akwụkwọ, nkà na-akụziri.
The n'èzí ngosi nka e meghere na-esote 2nd agụmakwụkwọ ụlọ nke ISTU: isii samples of nnukwu-caliber egbe (D-20 152-mm howitzer-egbe, M-46 130-mm towed egbe, M-30 122-mm howitzer, D-48 85-mm mgbochi tank egbe, S-60 57-mm-emegide ugbo elu egbe, D-30 122-mm howitzer) na-egosi.
The University Switched ka usoro nke na-akwadebe ngụsị akwụkwọ oru na a contractual ndabere: 58 ngalaba nke ISTU kpụrụ a set nke iwu nke n'ọrụ na-eme ka ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nnyocha ubre oru ngo nke ha ụlọ ọrụ.
The mbụ ememme amụrụ guitar abu "abụ nke GaleWood" ada itie ke Sports na Recreation Camp nke ISTU "Galevo".
The Laboratory nke ụzụ Physics n.a. Yu.M. Merzlyakov e meghere. O mere ka a oké onyinye humanitarization agụmakwụkwọ na Institute, mgbanwe nke IMI n'ime a technical mahadum na nzukọ nke okokporo ọmụmụ. The Faculty of Instrumentation Engineering kwadebere Ọla aha mgbe Yu.M. Merzlyakov "N'ihi na Ọmụmụ rụzuru na Active Ikere na Public Life" na "Scientific Onyinye".
ISTU were mbụ ebe ke Republic mpi na nzukọ nke ọrụ izi na elu agụmakwụkwọ njikọ nke Udmurtia.
Boris Anatolyevich Yakimovich, DSc, prọfesọ, a họpụtara ndị Rector nke ISTU.
The otu nke ISTU programmers were mbụ ebe na XI Ural Team Student Championship na mmemme.
The ewu nke Business àkwá maka Undergraduate na Postgraduate ụmụ akwụkwọ na-eme nnyocha e dechara (na ngụkọta nke ebe 1000 sq.m. ike ịba banyere 20 oru ngo-ụlọ ọrụ). Ngo nke otutu Business àkwá bụ otu n'ime ndị mmeri nke mba mpi na ndị dị otú ahụ oru ngo n'etiti 40 Russian mahadum.
Nwughari nke football ubi na Stadium "Burevestnik" e dechara. Nkwekọrịta na Russian Football Union e banyere ịmepụta otu n'etiti ógbè sports center nke keobere football na ISTU.
The 3Rd gburugburu nke All-Russian Student Olimpik na usoro na Machine Science ẹkenịmde.
The mbụ mpi na-amụrụ video fim "SKIF" E mere ndokwa maka.
Six okokporo na onye-nwe-amụ mmemme nke ISTU e nyere ikike ịbụ site Central Evaluation na Accreditation Agency (ZEvA) ( Hannover, Germany). Dị ka nnyocha na-arụpụta, na-adịgide Adịgide Accreditation Commission of ZEvA mere a ọgwụgwụ nke na niile inyocha mmemme izute European ụkpụrụ. All ụmụ akwụkwọ ndị na-gụrụ akwụkwọ na ndị a na omume nwere anata European ubre Mgbakwunye na ha ubre na agụmakwụkwọ ka elu.
Ọkà mmụta sayensị nke ISTU (V.I. Goldfarb, E.S Trubachev., D.P. Gromov, A.S. Kuznetsov) na-ọdịda nke State Nrite nke Udmurt Republic na Science and Technology maka emebe na ịmụta a ọhụrụ nso nke ibubata nnọchi Mbelata gearboxes nke ọgbọ ọhụrụ maka mmanụ na gas, chemical na ike ọrụ.
ISTU-aghọ a so na Russian Public Òtù "Union of Russian Mechanical Engineers". ọrụ, nkụzi na ụmụ akwụkwọ nke mahadum iso a na nzukọ kwa afọ.
ISTU otu merie ọlaedo Ọla na International Collegiate Programming Kọntestị ACM-2008 n'obodo Banff, ógbè Alberta , Canada .
The mbụ ogbako-Olimpik na mmemme hazie na ẹkenịmde ọnụ na Lomonosov Moscow State University.
The mbụ All-Russian usopidem ke Nsogbu nke State Plan Realization na Ọzụzụ nke Personnel maka Enterprises of Defense Industry Mgbagwoju ẹkenịmde. The sonyere nke nzukọ ndị rectors n'ime ihe ndị kasị na-akwanyere ùgwù institutes nke elu-akụziri si Moscow, St. Petersburg, Kazan, Chelyabinsk, Perm, Samara, Krasnoyarsk na oru na ndị nnọchiteanya nnukwu ụlọ ọrụ nke Russia .
The ọchịchị iji usoro maka ịbata ozize specialties e emejuputa.
The nkume ihe ncheta e tinyere elu na 2nd ụlọ nke ISTU na ncheta Alexey Afanasievich Konovalov, otu n'ime ndị mbụ ndị dọkịta nke Science na IMI, prọfesọ, so Russian Academy nke Kaiser na Atilari Sciences, Dean nke ngalaba nke Mechanical Engineering nke IMI (1989-1994), ama ọkà mmụta sayensị na ubi nke ballistics.
Nkà mmụta sayensị na-methodological center nke Russian Biathlon Union e meghere na ngalaba nke Sports nke ISTU.
The mbụ nwe gụsịrị ISTU (131 ndị mmadụ). The University nyere 15 ukwu mmemme.
The Scientific Conference-Onodi "Control Theory na Mathematical Modelling" (IMS-2008) ẹkenịmde. The ogbako e raara nye Nikolay Viktorovich Azbelev, DSc, Prof., Asọpụrụ Prọfesọ nke ISTU.
OTU volleyball otu, dike n'etiti mahadum ìgwè Privolzhsky Federal District, a kpọrọ site "Russian Sports Association" na Sidney isonye na omenala "Russian Volleyball ndorondoro" na Australia. The egwuregwu si Izhevsk merie ndị mbụ ebe nke ndorondoro; ha onwe-ha zutere na ihe ngosi egwuregwu na họrọ otu nke University of Sydney na Sydney State University of Technology.
The Faculty of Postgraduate Studies na agbakwunyere Professional Education e nyere ikike ịbụ ndị Ministry nke Housing na Building nke Udmurtia na natara ikike iduzi ọkachamara update ọmụmụ maka ọkachamara nke Udmurt Republic ke kpuchie nke Self-Regulatory Organizations nke Federal na Republican larịị.
The nkume ihe ncheta e meghere na ISTU na ncheta Mikhail Semenovich Gorokhov, DSc, prọfesọ, asọpụrụ so Russian Academy nke Kaiser na Atilari Sciences, classic nke esịtidem ballistics.
The All-Russian Scientific na nka na ụzụ Conference "onu nke M.T. Kalashnikov - Fusion nke Science na Mmeputa "raara onwe ya nye na 90nke ncheta nke mmebe ẹkenịmde. The ụlọ n.a. Kalashnikov e meghere ndị ọkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ nke ISTU.
ISTU ghọrọ onye òtù nke Association "Privolznsky Ụyọkọ University of Automobile Industry" nke na-eme asaa mahadum nke Privolzhsky Federal District.
Ọmụmụ-laabu ụlọ nke ISTU No 5 e solemnly meghere.
The otu ụmụ akwụkwọ na-eto eto ndị ọkà mmụta sayensị nke ISTU n'okpuru nlekọta nke G.V. Lomaev, DSc (Department of Instruments na Usoro nke Quality Control) ndibọhọ a 6 nde ruble Grant na mpi nke Foundation maka Promotion nke Development of obere ulo oru na nọ nke Science and Technology (n'okpuru nkwado nke Ivan Bortnik).
Otu n'ime ndị kasị ibu afọ ofufo Associations maka Assistance ka Army, Aviation na Fleet e agbakee.
The Center maka Innovative kwesiri Programs e tọrọ ntọala na showroom "Rakurs" e meghere.
El'Manuscript-09-WS International Scientific School maka Youth ẹkenịmde. The sonyere nke ụlọ akwụkwọ ahụ na-eduga ndị ọkà mmụta sayensị na ụmụ akwụkwọ si Russia, Germany, France, na USA, Canada, Bulgaria na Norway.
The telivishọn nke obodo maka oge mbụ broadcasted kwa izu ozi ọma mmemme "Studencheskaya, 7", mere site otu nke mahadum telivishọn si Department of Public Relations nke ISTU.
The mbụ ụbọchị abụọ oghe Hot-Jazz Marathon ẹkenịmde, nke e mechara ghọrọ a omenala. Ọ bụ a Jazz ememme na sonyere na Izhevsk na ọtụtụ ndị ọzọ obodo Russia.
The mbụ Innovative Nọn nke Young Scientists, Ihe ọhụrụ na Ọkachamara nke Udmurtia wee ebe. The sonyere nke Nọn na-eto eto ndị ọkà mmụta sayensị nke Izhevsk State Technical University, Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk State Agricultural Academy na Udmurt State University.
The Center nke Czech asụsụ na Culture e eze meghere. E guzobere ya ọnụ na South Moravian Center for International Agagharị (Moravian Center for International Agagharị, JCMM). Klas na-eduzi site nkụzi si Czech Republic. The Center awade ọmụmụ bụghị naanị n'ihi na ụmụ akwụkwọ nke ISTU ma n'ihi na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na mahadum nke Republic.
Ọkà mmụta sayensị nke ISTU (B.A. Yakimovich, Yu.O. Mikhailov, N.A. Koryakin) na-ọdịda nke State Nrite nke Udmurt Republic na nọ nke Science and Technology maka mmepe nke elu teknụzụ na ịmụta nke mmepụta nke rọketi ozu. The otu ghọkwara Laureates nke "Golden Echiche" na-agbata n'ọsọ nke "rụzuru na Ubi nke Military ngwongwo Production na Ngwa nke State-nke na-Art Technologies".
A pụrụ iche na ogbako maka ọkachamara mmepe nke oru nke isiokwu na-ebipụta ngalaba "Ugbu-Day Nsogbu nke University Book Publishing" E mere ndokwa maka ọnụ na Ivan Fedorov State University of Printing Arts na Moscow. The results nke atọ n'etiti ógbè "University Book" Asọmpi e kwupụtara.
Andrey Gumennikov, a-nwe-amụrụ, ghọrọ a Laureate nke Russian Asọmpi na nke kacha mma na-amụrụ na nkà mmụta sayensị ọrụ maka "Energy arụmọrụ Technologies". Ọ e ọdịda a nrite nke Ministry of Education na Science nke Russian Federation "N'ihi Best Scientific Work".
47nke Spartakiad "Enyi" nke Ural mahadum ẹkenịmde ke ISTU.
The Faculty of Mathematics na Natural Sciences e meghere na ndabere nke ngalaba nke Applied Mathematics.
The Council of Young Scientists nke ISTU e guzobere na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ogbako nke PhD ụmụ akwụkwọ, nwe ụmụ akwụkwọ na-eto eto ndị ọkà mmụta sayensị.
M Student International Olimpik na usoro na Machine Science E mere ndokwa na ISTU esonụ mkpebi nke International Federation maka Promotion nke usoro na Machine Science (IFToMM); bụ nke mbụ Olimpik nke mba ozo na akụkọ ihe mere eme nke a Federation.
ISTU kwadoro Russian Volleyball Championship (nwoke ìgwè nke mbụ League).
The mbụ okwu ihu ọha ụlọ n.a. ulo oru ụlọ ọrụ meghere na ISTU: V.S. Chuguevsky (Izhevsk Mechanical Plant) na NPO "Computer".
The mkpokọta Research Center nke Innovative Technologies na Ihe nhazi e meghere na ISTU. Ndị ọkachamara na-ekwu na ọ bụ ihe pụrụ iche na naanị center maka nonmetallic ihe onwunwe nhazi na Volga mpaghara. The center nwere oge a elu-tech ngwá - CNC igwe osisi nhazi, fusing ite-ọku uku (iko nhazi).
The mbụ nwata forum nke collegiate ọgụgụ isi asọmpi na innovations "Young Generation - 2011" E mere ndokwa maka. Karịrị 80 Undergraduate na Postgraduate ụmụ akwụkwọ, -eto eto ndị ọkà mmụta sayensị si mahadum nke Republic na ọkachamara si Izhevsk ụlọ ọrụ wee akụkụ ke forum.
on 22 February Izhevsk State Technical University-eme ememe ya 60nke ncheta.
Mgbe ihu ọma nke Ministry of Education na Science na Government nke Russian Federation, Izhevsk State Technical University aha mgbe Mikhail Kalashnikov, a kpara mmebe nke obere ogwe aka, ma ugbu a na-akpọ Kalashnikov Izhevsk State Technical University.
Boris Anatolyevich Yakimovich, DSc, prọfesọ, e re-hoputara ndị Rector nke Kalashnikov ISTU.
Abụọ okwu ọhụrụ ụlọ, e mepere agụmakwụkwọ-laabu ụlọ No 5 nke Kalashnikov ISTU na nkwado nke OJSC "n'etiti ógbè n'ụzọ Telecom", CJSC "Rossi-Telecom" na OJSC "Mobile tele Systems".
Institute of Modern Technologies na Mechanical & Automotive Engineering na Metallurgy e guzobere na-adabere na nke ngalaba nke Advanced Technologies na Automobiles.
Tikhonov Institute of Physical Ọzụzụ na Sports e guzobere na-adabere na nke ngalaba nke Sports. Na ulo akwukwo a aha mgbe okpukpu anọ Olympic biathlon mmeri Alexander Tikhonov.
on 30 January ọhụrụ na-egwu mmiri nke Kalashnikov ISTU e meghere. Ọ na-e wuru ke kpuchie nke oru ngo nke party "Edinaya Rossia" (United Russia) "500 igwu ọdọ mmiri".
on 18 June ndị International mkpokọta Research Center "Center nke elu nhazi Technologies" e solemnly meghere na Kalashnikov Izhevsk State Technical University ọnụ na HTW Aalen, Zeh GmbH, Stuttgart na MKV GmbH, Allersberg (Germany). Ọ na-ezubere iche na usoro iwu na ihe ọzụzụ nke ụmụ akwụkwọ na mmughari nke ndị mmadụ site na ụlọ ọrụ ọkachamara na galvanization na implements elu environmentally friendly teknụzụ.
Ị chọrọ atụle Izhevsk State Technical University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Jikọọ na-atụle nke Izhevsk State Technical University.